Frank�f�nia Mety halefa any Mahajanga ny fiaramanidina sasany ?
Filoham-pirenena telopolo eo hatreto no nambaran�ny mpikarakara ny fandraisan�i Madagasikara ny fihaonana an-tampony faha-16 ny Frank�f�nia, fa ho avy
. Aiza ny toerana hasiana ny fiaramanidina hitondra azy ireo raha samy hitondra iray avokoa izy ireo ? Marina fa nasiam-panitarana ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato, saingy raha irony fiaramanidina lehibe na “gros porteur” irony avy no mitondra an’ireo filoham-pirenena sy Mpanjaka ho avy ireo dia azo antoka fa tsy ho antonona an’izany telopolo izany ny toerana eny Ivato. Ny seranam-piaramanidina Philibert Tsiranana ao Amborovy Mahajanga ihany anefa no hany afaka mandray karazam-piaramanidina lehibe toy ireny aorian’Ivato. Halefa any ve sa hifanisika eo Ivato ? Mbola baraingo ihany koa ny amin’ireo fitaovana eo am-pelatanan’ny Air Madagascar, hisintonana ireo fiaramanidina haka toerana amin’ny “parking”. Hahatanty ny asa hataony mandritra ny hadimiana haharetan’ny Frankôfônia ve ny eo am-pelatanana, izay ny teo ihany no teo, tsy nisy fanavaozana. Ampy ihany koa ve ny olona manana traikefa amin’ny fampidirana sy fandefasana fiaramanidina hiasa mandritra io fe-potoana io. Izay nanontaniana moa omaly dia nilaza fa eo am-pandaminana ny amin’izany.